Imbali kaMnu - Malunga Toys
Imbali kaMnu. Potato Head inomdla kakhulu. Ayisiyiyo le nto yokudlala kuphela eyabhengezwa kumabonwakude, kodwa yayikwindawo edumileyo Ibali lethoyi iifilimu.
UGeorge Lerner, umvelisi wezinto zokudlala ovela eBrooklyn, wenza uMnu. Kwakungunyaka we-1949, kwaye weza nombono wokuthatha izinto zobuso kunye namalungu omzimba awafaka kwimifuno nakwiziqhamo ukwenza ubuso. Iinguqulelo zokuqala zikaLerner zibandakanya iitapile ezithathwe kwigadi kanina. Wayeza kusebenzisa ezinye iziqhamo kunye nemifuno ukwenza oonodoli abantakwabo abancinci ukuba badlale nabo.
Imifanekiso yaBaphambukeli bebali leToyi
Ukulawula kude kude noololiwe beToyi
I-Bull Terrier enezinto eziKhethiweyo zokuThengisa izilwanyana
Umdla omncinci ekuqaleni
Umbono wokusebenzisa ukutya njengezinto zokudlala khange ubonakalise ukuba uyathandwa. Abantu baseMelika bakhumbula ulwabiwo lokutya kunye nezinye izinto ngexesha leMfazwe yesibini (II) yeHlabathi kwaye umbono awuzange ubambe. Abavelisi bezinto zokudlala bakuthatha njengenkunkuma yezixhobo, kwaye bayikhaba ngaw 'omane loo mbono.
Ekugqibeleni, uLerner wakwazi ukweyisela inkampani yokutya okuziinkozo ukuba ifake into yakhe yokudlala njengebhaso kwiimveliso zabo. Wathengisa amalungelo kumbono weedola ezingama-5 000, eyayiyimali eninzi ngelo xesha.
Ngo-1951, uLerner wabonisa umbono wakhe kuHenry noMerrill Hassenfeld, ababeneshishini lokuthengisa izinto zesikolo kunye nezinto zokudlala. Umsebenzi wabo waziwa njengeHasbro namhlanje. Abazalwana baseHassenfeld babenomdla kule nto yokudlala, kwaye bahlawula inkampani yokutya okuziinkozo i $ 2,000 ukuyeka ukuyifaka kwiimveliso zabo. Baye bahlawula i $ 5,000 ngamalungelo kuyo. ULerner wahlawulwa i- $ 500 kwangaphambili kwaye wafumana iipesenti ezintlanu zentengiso.
ukuba uzothini emntwini xa eswelekile
Mnu. Amazambane iNtloko uzelwe
Into yokudlala entsha yangena kwimveliso kwaye 'yazalwa ngokusesikweni' ngoMeyi 1, 1952. UMnumzana uPatato Head wanikwa uluntu nge $ 0.98. Inguqulelo yokuqala efumanekayo yentengiso iqulethe ezi ziqwenga zilandelayo:
Amehlo (amabini amabini)
Iinwele zobuso (iziqwenga ezisibhozo zokuziva)
Olu hlobo lwento yokudlala alubandakanyi umzimba. Umthengi kuya kufuneka anike iitapile abantwana ukuba badlale nazo. Le nto yokudlala intsha yabetha kwangoko ebantwaneni, kwaye iintengiso zikamabonwakude zaqala ngo-1952 zanceda ukunyusa ukuthengisa kwiiyunithi ezingaphezu kwesigidi kunyaka wokuqala.
Mnu. Potato Head Ufumana Umfazi
UNkskz. Potato Head wongezwa kulo mgca wokudlala ngo-1953. Ngama-1950, abathengi abathenga i-Potato Head Kit banokufumana ezi zincedisi ukuncedisa ukuthenga kwabo:
Izilwanyana zasekhaya, ezaziwa njenge 'Spud-ettes' nazo zanikezelwa. Iitapile zeplastikhi zabantwana zokuncamathela ebusweni ziye zongezwa kwikhithi ngo-1964.
Mnu. Amazambane entloko ikhula kumashumi asixhenxe
Ngo-1975, iitapile zika Mnu. Iimpawu zobuso kunye nezinto zokuncedisa zonyuswe ngokobungakanani ukuyizalisa. Eli nyathelo lenze into yokudlala ikhuselekile kubantwana abancinci ukuba badlale nayo, ngokuhambelana nemigaqo yokhuseleko eyaziswa ngurhulumente ngelo xesha. Iiflat slat zongezwa kuyilo ukuze abantwana bangabinako ukubeka iziqwenga kwiitapile kwindawo engeyiyo.
Uphuhliso olukhulu olulandelayo kwimbali ka Mnu. Potato Head lwenzeka ngoo-1980. I-Hasbro inciphise inani lezincedisi, kunye nemingxunya ejikelezayo kwakhona yaba yinto eqhelekileyo kule nto yokudlala.
Iimbeko zeNtloko zeNtloko ze-Mr. Mnu
Mr. Potato Head nangoku kakhulu yinxalenye yenkcubeko ethandwayo. Irandi kwimpumelelo yakhe imi ngolu hlobo lulandelayo:
Ngo-1986 : Wabizwa ngokuba yi 'Spokespud' ye-Great American Smokeout xa wajika umbhobho wakhe waya kwi-Surgeon General, uC. Everett Koop, eWashington, D.C.
Ishumi elinethoba, anamanci asithoba anesihlanu : INtloko yeetapile ibingumlinganiswa obalaseleyo kwifilimu yoopopayi, Ibali lethoyi .
2000 UMnu. Potato Head wahlonitshwa ngokungeniswa kwiholo yokudlala yoDumo.
2001 : Kwaziswa umzobo ohlekisayo obekhatshwa nguMnu.
Umnumzana i-Potato Head yinto yokudlala abantu abaninzi abayikhumbulayo bayonwabela njengomntwana. Uyaqhubeka ukonwabisa abantwana namhlanje.
Igadi Isiseko Bridal Party Zomatshini Industry Autism Kanye Bantwana Ukuthandana Iingcali
Ukusilela Kwevitamin D
ndingenza phi uvavanyo lwe-dna mahala
xa indoda ye-taurus ikuthanda
ukuthandana nomntu otshatileyo
ileta eya kumntu omthandayo okukhathaza